वैश्वीकरण, रुझान र पाठ
कहिल्यै हाल इतिहास देख्न परिवर्तन देख्यो कि अन्तिम शताब्दीका अन्त भएकोले, अधिक छैन Antiga. यो फलाम पर्दा र सोभियत संघ अलग गरे. यो एक Singular घटना, कहिल्यै ठूलो साम्राज्य यस्तो धूर्त तरिकामा disappeared किनभने, युद्ध वा Revolutions बिना. असामान्य यस तथ्यलाई थपियो, एक चीन observamos, साम्यवाद को आफ्नो रूढिवादी दृष्टिकोण संग, पूंजीवाद आधारित आर्थिक विकास एक लाइन अपनाउने. Pensado कहिल्यै, यस्तो छोटो सूचना मा!
र अब, सँगै ग्लोबल वार्मिंग संग, र वैश्विक सन्दर्भमा यी संरचनात्मक परिवर्तन, पनि डलर trillions को जल पालन (आर्थिक संकट 2008 र वैश्विक मंदी)!
पक्कै पनि, यो मानव इतिहासको एक अद्वितीय क्षण छ.
के निष्कर्षमा पुगे सकिन्छ, यी घटनाहरू संग?
पहिलो, केही अनन्त छ.
दोस्रो, यो निश्चित आर्थिक समूह को लोभ र निहित चासो बिना फराकिलो दृष्टि र भविष्य परिदृश्यहरु हुनु पर्छ, राजनीतिक वा क्षेत्रहरु र वैश्विक लाग्छ र वैश्विक काम, वा अर्को पुस्ता बाँच्न संसार छैन हुनेछ.
तेस्रो, बजार पक्कै नियन्त्रण आवश्यकता, थुप्रै एजेन्ट बावजुद र "कारखानों" के "सजिलो पैसा" सहमत छैन. तथापि, पहिले नै मुक्त व्यापार र खुला बजार लागि सङ्गठित बचत को nationalization लागि क्षमा वा समाजीकरण सफाइ छैन त्यस्तो नियन्त्रणको लागि आवश्यकता. राज्य पर्छ, सबैभन्दा constitutions मा परिभाषित रूपमा, नियामक रूपमा आदेश काम, न्याय र स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत अधिकार को संरक्षण र आदर. के देख्न सकिन्छ आज, क्रम को कमी छ, न्याय र आदर.
कोठा, एक आधारभूत रणनीति सम्झना, एक analogy प्रयोग, एक टोकरी मा आफ्नो सबै अन्डा राखे कहिल्यै, अर्थात्, एक अर्थव्यवस्था मा सबै आरक्षण लागू गर्न, बजार वा पृष्ठभूमि.
पाँचौं, सन्तुलित वैश्विक शक्ति (आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य) यो वैश्विक लोकतन्त्र लागि आवश्यक छ र असमानताओं कम गर्न. Radicalism वा hegemonic स्थान लागि कुनै कोठा छ. विश्वव्यापी गाउँका व्यापक सहभागिता र सहमति छ भने, हालको विश्वव्यापी संकट reversing प्रक्रिया लामो र घाटा र आर्थिक घटनाहरू र सामाजिक खराब हुनेछ, यो विकसित र विकासशील दुवै.
छैटौं, संसारको निरन्तर विकास र परिवर्तन छ, केही स्थिर छ, कुनै एक सत्य वा काम गरेर मात्र सही बाटो मालिक, आपसी सहयोग र प्रतिबद्धता, आज, यो भन्दा बढी आवश्यक छ. हामी काम र विश्व अन्तरक्रिया र कर्मचारी सक्छन् भनेर अस्तित्व र विभिन्न संस्कृतिका र भन्सार ज्ञान को जानकारी आवश्यक छ.
सातौं, तपाईं सिकिरहेको हरेक दिन!
आठौं, अघिल्लो बिन्दुको एक corollary रूपमा, यो एउटा अनन्त सूची छ.
← सामाजिक नेटवर्क र व्यवसाय विकास
कोक्रो गर्न कोक्रो – कोक्रो डिजाइन गर्न कोक्रो →
Italicahomes – टस्क्यानी र इटाली घर र विला खरीद
IEAGE – व्यवस्थापन र उद्यमशीलता विकसित अध्ययन संस्थान
फर्नीचर हाउस इटाली